Tiknoolajiyadda Wireless -ka ee Optis ayaa $ 300 Milyan ka heshay Apple markii ugu horraysay | Waxaan ka imid mac
Tiknoolojiyadda Wireless -ka ee Optis ayaa 300 milyan oo doolar ka bixineysa Apple
Patent -ku waa ganacsi dhaqaajiya malaayiin doolar adduunka oo dhan kiiskan Apple waa mid ka mid ah shirkadaha leh kuwa ugu badan adduunka, laakiin waxaa jira kuwo kale oo ficil ahaan si gaar ah ugu heellan samaynta shatiyada kadibna u dacwooda iyaga. Xaaladdan oo kale Optis Wireless Technology, waxaa iska leh mid ka mid ah shirkadahaan isu keena koox shirkado ah oo si gaar ah ugu heellan teknolojiyadda patent -ka ka dibna dacwad ku soo oogto shirkado kale si ay u isticmaalaan shatiyadooda diiwaangashan.
Optis iyo tiisa shirkadaha walaalaha ah, Optis Wireless Technology, Tiknoolajiyadda Gacanta ee Optis, Planet Unwired, iyo Unetired Planet International waa hay'ado aan wax soo saar lahayn oo haya dhowr shati oo dakhli u soo saara iyaga dacwadaha. Qoraal rasmi ah, shirkadda Cupertino lafteeda ayaa ku tilmaantay inay yihiin "troll" shirkado oo kaliya u helaya shatiyo si ay dakhli u abuuraan iyagoon waligood u adeegsan badeecadaha ama wixii la mid ah, maadaama aysan iyagu soo saarin.
Apple waxay jebisay taxaneyaal shati ah oo Teknolojiyadda Wireless -ka ah oo la xiriira tikniyoolajiyadda 4G LTE ee loo isticmaalo Apple Watch iyo alaabooyin kale oo ka socda shirkadda Cupertino. Xaaladdan oo kale, xeerbeegtida ayaa ogaatay in Apple ay ku xad -gudubtay shan shati oo ay diiwaan -gelisay is -bahaysiga shirkadaha Optis. Waqtigaas ayaa lagu dhawaaqay tiro aad u badan, gaaray ilaa 506 milyan oo doolar, laakiin markii dambe garsoore ka tirsan gobolka Texas ayaa jebiyey xukunkaas dhowr bilood ka dib si uu diiradda u saaro oo kaliya khasaarihii ka dhashay iyadoo si weyn hoos loogu dhigay lacagtii ugu dambaysay ee Apple bixin lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Tiknoolojiyadda Wireless -ka ee Optis ayaa 300 milyan oo doolar ka bixineysa Apple
MacBook Pro oo leh qalin Apple. Ma arki doonnaa dhowaan?
Waxaa jiri doona xal u dhexeeya dhibaatooyinka u dhexeeya macOS iyo scanners dhawaan